Warshadaha wax soo saarka korontada - Soosaarayaasha, Badeecada Alaabada Shiinaha
Badeecadani waa nooc madow oo qoto dheer, oo aan milix lahayn (aan dhadhan lahayn), ilaalinta deegaanka, oo aan waxyeello u lahayn jidhka bini'aadamka, muuqaal aan caadi ahayn oo mucilage ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa difaaca qaranka iyo saliida, warshadaha kiimikada, saldhiga gaaska, kaabashka, bakhaarka halista ah iyo meelaha kale ee halista ah ee qatarta ah, sida tuubada soo bandhigta ama shaqaalaha fiilooyinka fiilooyinka
Waxaa loo isticmaalaa go'doominta qarxa-caddeynta iyo shaabadaynta. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu duubo silig, wadajirka, fiilada, tuubada, siligga dhulka, iwm si looga hortago dabka.
Qalab furfuran oo dabiici ah oo ka mid ah shaabad dab-demiye ah
Dhoobada dabka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa walxaha dabka dhaliya ee dabka ka hortaga, oo loo qaybin karaa bac iyo sanduuq. Maaddada waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xiro godadka fiilooyinka iyo fiilooyinka si looga hortago dabka fiilooyinka iyo fiilooyinka in uusan ka faafin godadka illaa qolalka ku dhow isla markaana uu yareeyo qasaaraha dabka. Waxay leedahay shaqooyinka ka hortagga qiiqa, ka hortagga dabka iyo ka hortagga boodhka. Sidaa darteed, qalabka wax lagu xiro waxaa si weyn loogu isticmaalaa dhirta korantada, warshadaha iyo shirkadaha macdanta, dhismayaasha dhaadheer, awoodda dhismaha maraakiibta, boostada iyo isgaarsiinta, kaabis, metallurgy iyo injineernimada kale ee nidaamka.
Maaddada dab-damiska ah ee aan dabiiciga ahayn, oo sidoo kale loo yaqaanno qalab deg deg ah oo dab-damis ah.
Waxaa badanaa loo yaqaannaa qalab deg deg ah oo dab-damis ah
Badeecadani waxay ku habboon tahay ka hortagga dabka ee korontada iyo fiilooyinka isgaarsiinta, taas oo ahmiyad weyn u leh baabi'inta khataraha qarsoon, hubinta hawlgalka caadiga ah ee gudbinta awoodda iyo khadadka qaybinta iyo khadadka isgaarsiinta. Cajaladda isdifaaca ah ee dabka aan dabka lahayn ee ay soo saartay shirkaddeena waa nooc cusub oo ka mid ah wax-soo-saarka dabka-difaaca ee fiilooyinka korantada iyo isgaarsiinta Waxay leedahay faa'iidooyinka ka-hortagga dabka iyo waxqabadka dabka, isku-dhejiska iyo waxqabadka. Ma aha mid sun ah, aan dhadhamin oo aan lahayn wasakhda wasakhda, mana saamaynayso awoodda qaadista hadda ee xarigga ee ku shaqaynta xarigga. Sababtoo ah cajaladda dabka ee isdifaaca ah ayaa loo isticmaalaa in lagu duubo dusha sare ee galka fiilada, marka dab dhaco, waxay si dhakhso leh u sameysan kartaa lakab kaarboon leh karis oksijiin iyo kuleylinta kuleylka, taas oo si wax ku ool ah uga hortageysa in fiiladu gubato
Guddiga dahaadhka dabka (qaabka: dc-a2-cd08)
dc-a2-cd08 system plate sealing fireproof system waa nooc cusub oo ka mid ah waxyaabaha dabka ka caagan oo ay soo saarto shirkadeena, taas oo aan ur lahayn, halogen-ka lahayn, oo leh iska caabin cimilo wanaagsan, cabiraada qiiqa iyo cidhiidhiga hawada. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa awooda nukliyeerka, isgaarsiinta korantada, metallurgy iyo warshadaha batroolka kiimikada. Sababtoo ah dhismuhu waa sahlan yahay, markaa way badbaadin kartaa xoogga shaqaalaha waxayna yareyn kartaa qiimaha. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay beddelka xad-dhaafka ah ee joogtada ah Qaybaha muhiimka ah ee jirka.
Nooca CDDT-AA ee nooca dabka ka celiya dabka ayaa ah nooc cusub oo ka mid ah daaha ka hortaga dabka oo ay soo saartay shirkadeena iyadoo la raacayo heerarka wasaarada amniga bulshada GA181-1998. Shayga wuxuu ka kooban yahay dhammaan noocyada dab-damiska, bacrimiyeyaasha iwm. Waa xarigga biyaha iyo korontada ee horumarsan ee dalka ka jira.Soosaarkan wuxuu soo saari karaa labis isku mid ah iyo cufan xiiran xumbo marka uu kululeeyo. Waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa oo xannibi kartaa faafitaanka iyo fiditaanka ololka, waxayna ilaalin kartaa fiilooyinka iyo fiilooyinka. Faa'iidooyinkiisa ugu waaweyn waa: ilaalinta deegaanka, wasakheyn la'aan, sun lahayn iyo dhadhan la'aan, khatarna uguma aha caafimaadka shaqaalaha dahaadhka. Badeecadani waxay sidoo kale leedahay astaamaha dahaadhka khafiifka ah, adhesion xoog leh, dabacsanaan wanaagsan, iyo kuleylka wanaagsan iyo howlaha ka hortagga daxalka.
Dc-a1-cd04 Caqabada dabka aan dabiici ahayn ayaa sidoo kale loo yaqaanaa ka hortaga dabka ama saxanka dab damiska ee aan guban karin. Guddigan waxaa laga sameeyey waxyaabo kala duwan oo aan la guban karin iyadoo la adeegsanayo isla markaana la riixayo si cilmiyaysan. Waxay leedahay waxqabadka ololka oo wanaagsan, waqti gubasho aan ka badnayn 3 saacadood haddii ay dhacdo dab, xoog farsamo sare, qarax la'aan, biyo iyo saliid iska caabin, caabbinta daxalka kiimikada ee adag, sun aan sun ahayn iyo astaamo kale. Imtixaanka gubashada ee dc-a1-cd04 caqabadda dabka aan dabiici ahayn, heerkulka ololka ugu fiican waa 1000 ℃ bilaa cillad la'aan, dhammaan tilmaamayaasha waxay buuxinayaan shuruudaha gb23864-2009, waxqabadka gubashaduna wuxuu gaarayaa heer (aan kacsi lahayn) oo ku qeexan GB / t2408 -2008. Dc-a1-cd04 caqabadda dabka ee aan dabiici ahayn ayaa inta badan lagu dabaqi karaa ka hortagga dabka iyo kala-soocidda dabka ee fiilooyinka heerarka danab ee kala duwan marka la dhigayo qaybta ama buundada Waxaa loo adeegsadaa injineernimada xargaha ee warshadaha tamarta, shirkadaha kiimikada, birta iyo shirkadaha dhalaalaya birta. , miinooyinka iyo meelaha kale ee fiilooyinka adag ee Shiinaha.
Qaybta joojinta dabka
Dm-a3-cd05 moduleka difaaca dabku wuxuu ka sameysan yahay qalab balaaran oo sunta sunta sunta sunta ah iyo habka gaarka ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa fiilooyinka dabka ka fiirsanaya ee fiilooyinka, fiilooyinka iyo qalabka korontada ee korontada, isgaarsiinta, metallurgy, petrochemical iyo warshadaha kale.